About Us - YIWU EXJIA DOKAMBAROTRA KEVITRA CO., LTD.
Yiwu Exjia Advertising Material Co., Ltd. Faritany Yiwu tanàna, isika ao amin'ny dokam-barotra manokana fitaovana nandritra ny 18 taona. Maro kaontenera no aondrana ho mahery 42 tany, miovaova sy henjana kalitao mifototra amin'ny 24 ora 'QC, ny vokatra anisan'izany: laminated Flex faneva, mifono Flex baventy (anisan'izany ny frontlit, backlit, avo roa heny loko sy blockout amin'ny lafiny iray pirinty), mafana laminated sy mifono blockout ho an'ny andaniny sy ny ankilany pirinty. Hot laminated PVC labasy, mifono PVC labasy, mifono harato. Zavatra tsy PVC horonantsary, fomba iray fahitana, tena adhesive vinyl, loko vinyl, lamba landihazo. Hisainana ara-nofo, PVC biraom-teny, pp taratasy, fitaovana biby fiompy, sary fitaovana, mangatsiatsiaka lamination sarimihetsika, mafana sublimation taratasy, temotra sy ny sisa.
manokana isika ao amin'ny famokarana sy ny teknolojia ny orinasa ity ny 18 taona, ary isika no matihanina ao amin'ny orinasa nasionaly ny fenitra sy ny vokatra fenitra.
dia manana mihoatra ny 16 taona ny fivarotana traikefa, dia afaka hanatitra ny mpanjifa amin'ny fanompoana tsara indrindra.
manana 24 ora QC rehetra horonana lanja, lavany, sakany, ambonin'ny, fanontam-pirinty vokany, fonosana, marika.
manana 6 karazana mifono sy laminated sy kalandrie milina, dia afaka manolotra fanaterana haingana ny fotoana.
efa naondrana tany amin'ny firenena 42. (fahatakarana ny tsena fitakiana ny firenena isan-karazany tanteraka), dia mahafantatra ny zavatra ilain'ny firenena indrindra momba ny entana sy ny kalitao.
EXJIA mandoa ny saina ho amin'ny faharetan'ny teknolojia sy products.There dia dimy Patents, izay ahitana tarehy efatra patanty, ny namorona patanty in EXJIA.
isika rehetra manao ny tsara indrindra ny manome asa fanompoana tsara indrindra ho an'ny mpanjifa: avo lenta ny vokatra amin'ny vidiny ambany, fanompoana tsara indrindra tamin'ny fotoana fanaterana haingana.
Fitaovana fanontam-pirinty: loko vaovao, haingana-paharitry hafainganam-pandehan'ny ranomainty. ady sy teny hotsaraina for 2 na 3 mandalo fanontam-pirinty, malama ambonin'ny, fitoriana ny rano ranomainty, Eco-solvent ranomainty, solvent ranomainty, anti-fr, anti-UV, dia mety hahatratra ny Vondrona Eoropeana fitsipika. Max Ambainy hatramin'ny 5.10 m.
PVC labasy: PVC labasy amin'ny harato mafy ao anatiny, tsara tensile, nandrovitra sy ny hidiran'i hery, anti-fr, anti-UV. manohitra ny holatra, anti-jiro, no lacquered surface Can amin'ny acrylic sy pvdf, mety efa tena madio.
Max miray volo sakany hatramin'ny 5.10 m (201 '')
Ny asa fitoriana dia ny hanolotra zava-dehibe ho ambony noho ny mpanjifa sy ny mpanjifa tsy tapaka.
Manome ny tsara indrindra vokatra, ny fanompoana tonga lafatra indrindra amin'ny vidiny mirary indrindra no fitsipika.
Izahay misisika foana ny fitantanana-pinoany ny "Quality no aloha, ny teknolojia no antony".
Raha liana amin'ny vokatra, dia azonao atao ny manolotra ny order vaovao amin'ny aterineto, ary dia mifandray anao avy hatrany, mitandrina ny tena tso-po sy maniry ny fiaraha-miasa ny zava-drehetra eo amin'ny lafiny tsara rehetra.
iray-Way Vision vinyl Film , vinyl an-Transfer Film , Quality Flex Banner , Solar Light hisainana FANAOVANA TAKELABY, Wholesale Frontlit Banner Material, Pvc Vinyl,